Chọta Mmetụta Gị: Mepụta Mkparịta ụka Globalwa Na-eduga Site na ọdịnaya sitere n'ike mmụọ nsọ | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 22, 2020 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Ahịa mmetụta na-ejikọ ụdị na olu dị ike nke ndị na-emepụta ọdịnaya dijitalụ. Njikọ ndị a na-akpalite ezigbo mkparịta ụka gburugburu ozi akara, na-enyere ndị okike aka iguzosi ike n'ihe ma na-agbaso usoro mgbasa ozi mgbasa ozi, ka ha na-akwalite mmata na njikọ aka.
Nke a na - eme ka okwu banyere ọnụ pụta n’uche igwe mmadụ gbadoro ụkwụ gị, site na ọwa mgbasa ozi mmekọrịta ebe ha na-etinye oge ha niile. Na Chọta Mmetụta Gị, anyị na-enyere gị aka ịchọta olu ziri ezi maka akara gị ka ha rụọ ọrụ ịgbasa ozi gị.
Chọọ Mmetụta Gị
The Chọọ Mmetụta Gị (FYI) ikpo okwu na-enye ndị ahịa ohere ịkọwapụta mmetụta, ịmalite mkpọsa, soro ọrụ na nsonaazụ akụkọ. Ọ bụ azịza ahịa ahịa ọ bụla na - enyere mmadụ aka nwere ike inyere PR na azụmaahịa nweta ndị ahịa ha ga - enweta ndị kachasị emetụta ụdị akara ha.
Igwe okwu FYI kachasị ọhụrụ gụnyere ike ọchụchọ siri ike, gụnyere afọ, ọnọdụ, ntinye aka, iru mmadụ, ngalaba ụlọ ọrụ, okike na agbụrụ. Ọzọkwa, nkwalite ikpo okwu FYI na-enye ndị ụdị ohere ịchọ ọchụchọ site na mkpụrụokwu dị n'ime ọdịnaya ha. Nke a pụtara na ụdị nwere ike ịchọ isiokwu nke nwere ike ịkọwapụta maka akara ha na ndị na-emetụta ha n'ime netwọkụ FYI ndị ji isiokwu ndị ahụ, ma ọ bụ okwu metụtara ya, na ntanetị mgbasa ozi, ma ọ bụ n'ime blọọgụ ha.
Nkwalite ndị ewepụtara na ụdị a bụ ozi afọ isii, jikọtara ya na nzaghachi ndị ọrụ, wee mee ka usoro ọchụchọ influencer dị ngwa. Sdị mara ụdị nke ndị na-eme ihe ike na ndị na-ege ntị na-ege ntị ha chọrọ ka anyị lekwasị anya ma anyị emeela ka usoro a dịkwuo mma iji wepụ ihe niile dị mgbagwoju anya ma jeere ha ozi ngwa ngwa.
Cristine Vieira, Onye isi ala na onye nchoputa nke Chọọ Mmetụta Gị
Ma ọ bụrụ na ndị otu ahia gị anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na ịnweghị ahụmịhe nke iso ndị na-eme ihe ike na-arụ ọrụ, FYI nwere ọrụ nhọrọ iji tinye ndị otu ahịa ha mere ihe maka gị. Na, ha pụta na-ekwe nkwa.
Hazie oge Chọpụta Mmetụta Gị
Banyere ịchọta mmetụta gị (FYI)
Tọrọ ntọala na 2013, Chọta Mmetụta Gị bụ ihe ngwọta SaaS dabere na ahịa azụmaahịa ndị ahịa wuru maka ndị na-ere ahịa. Dabere na ọtụtụ ụdị ndị kachasị elu na United States, FYI na-eji teknụzụ ikike maka ịchọpụta ndị na-eme ihe ike, ijikwa mkpọsa na usoro nyocha. Na ahịa dijitalụ na-agbanwe agbanwe mgbe niile, FYI na-ejikwa mmekọrịta na ụdị yana jikọtara ha na ndị nwere ikike iji wepụta nsonaazụ ejiri. Isi FYI dị na Scottsdale, Arizona ma nke ndị na-ahụ maka ngalaba Jamie Reardon na Cristine Vieira na-edu ya.
Tags: ihe nkiri cristinechọta ndị na-eme ihechọta mmetụta gịChaịesi chọta influencersinfluencer afọinfluencer na-ege ntị demographicsahịa ahịajamie gbaghaara
Email Vidio: Oge eruola maka ire ere iji nweta nkeonwe